30 Ducada In La Burburiyo Ruuxa Dib Udhaca | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 30 Salaadda Inaad Burburiso Ruuxa Dib-u-dhigga
30 Salaadda Inaad Burburiso Ruuxa Dib-u-dhigga
24 Laakiinse ima ay dhegaysan, dhegna iima dhigin, illowse waxay ku socdeen talooyinkii iyo fikirradii qalbigooda sharka ah, oo dib bay u socdeen, horena uma dhaqaaqin.
6 Rabbigu wuxuu leeyahay, Waad iga tagtay, oo dib baad u noqotay, sidaas daraaddeed gacantaydaan kugu soo fidiyey, waanan ku burburin doonaa, Waan ka daalay toobad keenka.
Dib-u-noqoshadu waa ruux. Ruuxda dib-u-noqoshadu waa ruuxa fallaagada iyo ruuxa caasinimadu waa ruuxa sixirka, 1 Samuu'eel 15:23. Ilaah ma doonayo in carruurtiisu caasiyoobaan, caasinimaduna waxay horseedaa gadaal. Markaan bilawno inaan ka hor tagno qorshaha iyo ujeeddada Eebbe ee nolosheena, waxaan bilaabeynaa inaan gadaal u soconno oo aan horey u sii soconno. Maanta waxaan u duceyneynaa duco aan cinwaan uga dhigay: Tukashada si loo burburiyo ruuxda gadaal. Tukashadani waxay awood kuu siineysaa inaad disho damacyada jidhka ee sharci darrada ah ee kugu horseeda inaad caasi ku noqoto Ilaah iyo sidoo kale inaad ruuxaaga ku xoojiso gudaha gudaha inaad Ilaahay u adeegto.
Ilaaheennu waa aabbo naxariis badan, wuxuu jecel yahay carruurtiisa si xad dhaaf ah oo aan shuruud lahayn, wuxuu u soo diray Wiilkiisa Ciise inuu noo dhinto oo uu inaga kaxeeyo dib udhaca iyo horumarka, Ilaah wuxuu inooga samatabbixiyey mugdi ilaa nuur, Kolosay 1:13, habaarka iyo barakooyinka, Galatiya 3: 13, addeeca Masiixa dartiis, Ilaah wuxuu baska ugu caddeeyay inuu xaq yahay, Rooma 5:19. Ilaah wuxuu waxyaalahan oo dhan inoogu sameeyey jacayl dartiis, ma ahayn inuu isagu sameeyo, laakiin isagaa yeelay. Wuxuu sidan u yeelay si aan ugu noolaano sida Masiixa oo kale oo aynaan ugu noolaan nolol dib u dhac ah. Wuxuu ogyahay in markaan gadaal u laabano, aan dib ugu laabano dambiga, isla markaana dembigu u horseedo hoos u dhac, fadhiidnimo, guuldarrooyin, niyad jab, cudurro, iyo dhammaan noocyada silica jinka. Dembigu aakhirka wuxuu inoo horseedi doonaa xukun weligiis ah, laakiin taasi weligeed qayb ka noqon mayso magaca Ciise. Tukashadan si loo burburiyo ruuxa dib u dhaca ayaa awood kuu siinaysa inaad iska caabbido sheydaanka oo aad istaagto masiixa. Baryadayda adiga ayaa ah tan, Waa inaad horay usocotaa oo aadan dib dambe nolosha ugu noqonin magaca Ciise. Allaha ku barakeeyo.
1. abeesada gadaal ha ku baabi'do dabka Ilaaha Eliisa, magaca Ciise.
2. Muraayad kasta oo sixir ah, wejigayga ku wareejisa, jabisa, magaca Ciise.
3. Xoogag jinniyo ah oo ka soo horjeedda masiirkayga ee Ilaah, sii daaya yoolkayga, magaca Ciise.
4. Waxaan aasaa ugaarsi kasta oo xiddigtayda maanta leh, oo lagu helo magaca Ciise.
5. Goliath kasta oo faqri ah, waa in lagu baabiyaa magaca Ciise.
6. Ilaahow, kac oo dhagaxyada ku tuur madaxa kuwa cadaawayaashayda, magaca Ciise.
7. Wabi kasta oo dhib ah, oo ku socda qoyskayga ayaa ku qallajiya magaca Ciise.
8. Cadow kasta oo abaabulan baa lagu abaabulayaa, magaca Ciise.
9. Ilaaha calaamadaha iyo yaababka, xooggaaga ku muuji noloshayda, magaca Ciise.
10. Fircoon ee hamigayga, ku dhinto, magaca Ciise.
11. Qayb kasta oo ka mid ah jirkayga oo googoos ah, ku baxso magaca, magaca Ciise.
12. Naarta Ilaah, indho la’aan iyo gudcurka noloshayda, magaca Ciise.
13. Jidhkayga, diido inaad lashaqayso fallaarta kasta oo gudcurka, magaca Ciise.
14. Door kasta oo sixir ah, oo ducadayda barakeysan, ku dhinta, magaca Ciise.
15. Harqood kasta oo soo saara, ku dhinta harqoodkaaga, magaca Ciise.
16. Maalgelin shaydaan kasta oo shaydaan ah oo noloshayda ah, ha lagu lumiyo, magaca Ciise.
17. Sayidow, noloshaydu ha ku qabsato dardar ilaahnimo, magaca Ciise.
18. Ajandaha shaydaanka ee noloshayda, wuxuu ku idlaaday magaca ciise.
19. Uur kasta oo shaydaan ah oo ku dhaca noloshayda, ku dhinta, magaca Ciise.
20. Waxaad ku nuuxnuuxsanaan doontaa wixii dhacay, inaad ku dhinto magaca Ciise.
21. Urur kasta oo xun oo miyir la ', i sii daa, oo magaca Ciise ku kala firdhi.
22. Fallaad kasta oo dulmiga ah, duulaan, magaca Ciise.
23. Waxaan uga yeedhayaa Laasaros xabaasha sixirka magaca Ciise.
24. Awood kasta oo liqaysa fursadaha rabbaaniga ah, waxay ku dhintaa, magaca Ciise.
25. Cadow kasta, oo diida inuu i daayo, laba jibbaar baa lagu helayaa, magaca Ciise.
26. Shumac kasta oo shar ah iyo foox kasta oo xun, oo aniga ila shaqeeya, dab ololaya, magaca Ciise.
27. Fallaadho kasta oo cibaado iyo allabari ah, oo dabka lagu shido, magaca Ciise.
28. Haddii cadowgaygu i dhahayo waan ku barwaaqoobi karaa meydkiisii, haddaba bal noqo, maxaa yeelay hadda waa waqtigii aan ku barwaaqaysan lahaa
29. Waxaan galay himiladayda wax sii sheegidda, magaca Ciise.
30. Waxaan la hadlayaa caloosha biyaha, Waxaan sii daayaa waxayaabaha igu burburay, magaca Ciise.
Aabe waad ku mahadsantahay ducada aad ku jawaabtay magaca Ciise.
article PreviousSida loo Joojiyo Qodobbada Salaadda ee dib looga laabto
Next article10 Dhibcood oo Salaad leh oo Awoodeed Rabaaqi ah
Freja Hammer Janaayo 20, 2020 saacadu markay tahay 7:33 pm
DIIWAANKA: Soo gal 3 maalmood oo sooman iyo duco u dhexeeya m. U soo ducee Isxaaq 43: 1-28, Yeremyaah 29:11 Ruuxa dib-u-noqoshada ee aabbahay reerkii iyo gurigii hooyaday, ee saamaynaya mustaqbalkayga, dab ku jejebiya, dab ku jebi, dab ku jebi, magaca Ciise.
Nkasiima Abriil 18, 2020 XXX: 5 pm
No more jinniyo shaydaanka in noloshayda in magaca Ciise
Aluko Luulyo 31, 2020 saacadu markay ahayd 5:03 am
Wuxuu ubaahanyahay duco gadaal gadaal .l eeg nafteyda ku laabto gurigeygii hore, iskuulada iyo goobta shaqada waxaan arkaa dhamaan gabdhaha hore riyooyin, laakiin nool iyo geeri, cunista riyo ku riyooday ama nakenss kaxeysana kabaha lugta isla markaana lugta lug ku dalbanaya iyo wixii la mid ah
Pls iga caawi wadaad in aan ku daalay
Karryann Davis Oktoobar 23, 2020 saacadu markay tahay 6:01 pm
Ha is dhiibin walaashey. Sii wad tukashada iyo soonka. Sii wad. Ilaahey ayaa dhabarka kuu haya. Riix dhanka calaamadda magaca Ciise.
Tessalie Tisson Janaayo 12, 2021 saacadu markay tahay 3:15 pm
@Aluko, soon soco. Qorniinka kula tukada meelaha allabariga oo dhan ee awowayaashiin dhiseen. Ka bilow inaad is-hoosaysiiso, oo aad cafis weydiisato iyaga, iyo naftaadaba, meel kasta oo aad jebiso sharciyada, amarrada, amarrada iyo qawaaniinta Ilaah. Waad aadi kartaa YouTube-ka oo waxaad ka raadsan kartaa Kevin Ewing, wuxuu leeyahay barisyo awood leh oo ku saabsan sida looga socdo soonka iyo tukashada, iyo aragti ku saabsan habaarka jiilka, macnaha riyada iwm. Waad barakaysan tahay.
Hannah Janaayo 14, 2021 saacadu markay tahay 9:42 pm
Mahadsanid!! Allaha ku barakeeyo Wadaadka
ebisa Maarso 15, 2021 saacadu markay tahay 5:06 pm
plz nin ilaah igu barya cinwaankan ducada iyo dhinacwalba oo noloshayda ah !!!.
Obadiah yarima dagwa Abriil 5, 2021 saacadu markay tahay 7:45 am
Waxaan ubaahanahay duco kadhan ah dib udhaca ruuxiga ah noloshayda, markasta oo aan riyoodo waxaan is arki doonaa tuulada, isku arkaa iskuul ama goobtaydii hore ee shaqaynta, dadkana waan hayaa waxaan arki doonaa aniga oo mar kale tagaya gurigooda. waan ka soomaa laakiin waan ka farxin kari waayaa waxaan u baahanahay salaada.
Elly Luulyo 22, 2021 saacadu markay ahayd 3:58 am
Waxaan ku riyoodaa waalidkey oo i korsaday, eedooyinkey iyo adeeradey iyo dhamaan dadka ku dhintey tuuladeyda, waxaan ku riyoodaa dadka ku nool tuuladeyda inay i siiyaan cunto, ma seexdo habeenkii waxaan ku riyoodaa asxaabteyda inay cunto i siiyaan seexo, runtii waan daalay. Fadlan parstor i caawi
5 U -Tirinta Ducooyinka Geerida
30 Salaadaha Subaxa hore Salaadaha Subax ee Dagaallada Ruuxa.
20 Salaad awood leh oo ka dhan ah Anshax xumada